April 6, 2021 - ApannPyay Media
ကိုယ့်ယောကျ်ား အိမ်မြဲစေချင်ရင် မိန်းမတို့ ဒါတွေရှောင်ပါ
April 6, 2021 by ApannPyay Media
ကိုယ့်ယောကျ်ား အိမ်မြဲစေချင်ရင် မိန်းမတို့ ဒါတွေရှောင်ပါ ကိုယ့်ယောကျာ်း အိမ်မြဲပြီး ကိုယ့်အနားမှာပဲ အမြဲရှိစေချင်တဲ့ ဇနီးတို့အနေနဲ့ ဒီအောက်မှာ ပြောပြထားတဲ့အချက်လေးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးကြည့်နော် အိမ်ရှင်မလေးတို့အနေနဲ့ အိမ်ထောင်သက်လာကြာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ယောကျာ်းက အိမ်မကပ်ဘူး၊ အပြင်မှာပဲ အမြဲနေချင်တယ်ဆိုတာမျိုး ကြုံလာနိုင်ပါတယ် ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ယောကျ်ားအိမ်မှာ မြဲစေဖို့အတွက် အိမ်ရှင်မလေးတို့ ဆောင်ရ ရှောင်ရမှာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အိမ်ရှင်မလေးတို့ ရှောင်ရမှာတွေကို ပြောပြမယ်နော်။ကိစ္စတိုင်းကို ပြဿနာလို့ မြင်တာမိန်းကလေးတွေရဲ့အဓိက ပြဿနာကလည်း စိတ်ပူတတ်တာ၊စိုးရိမ်တတ်တာ၊ ပွစိပွစိလုပ်တာနဲ့ ကိစ္စတိုင်းကို ပြဿနာအကြီးကြီးတစ်ခု အဖြစ် တွေးမြင်တတ်တာပါ။ ဒီတေ့ာ အိမ်က ပူပင်တာတွေ ဖြစ်ပြီး မအေးချမ်းတာတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ယောကျ်ားတော်တေ်ာများများက အိမ်ကပ်တဲ့အချိန် နည်းလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းပြီး ပူညံပူညံလုပ်တာတွေ လျှော့ပါ။ အရမ်းညဉ်းတွားတတ်တာတွေ ရှောင်ပါ။ … Read more
ရောဂါမျိုးစုံကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ စွယ်တော်ရွက်ဟင်းချို၏ကောင်းကျိုးများ စွယ်တော်ရွက်အနုလေးတွေထွက်တဲ့အချိန်ဆို အရွက်နုလေးတွေ ခူးပြီး ဟင်းချိုချက်သောက်ကြပါတယ်။ စွယ်တော်ရွက်က ဟင်းချိုလည်းချက်သောက်လို့ရသလို အရွက်ကိုရေနွေးဖျော်ပြီး ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးပြီး ဆီစိမ်းလေးနဲ့သုပ်စားလို့လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်း ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းထားပါ။ စားနိုင်သလောက်ရေပမာဏထည့်ပြီး ဆူပွက်လာသည်အထိတည်ပါ။ မျှင်ငပိအနည်းငယ်နှင့် အပေါ်မှ ထောင်းထားတာများကို ထည့်ပါ။ ဟင်းအိုးဆူလာရင် ချွေထားသော စွယ်တော်ရွက်များကို ထည့်ပါ။ အရသာမှုန့် ခတ်ပါ။ ဟင်းချိုအိုး ဆူလာပြီဆို ရပါပြီ။ စွယ်တော်ရွက်နုများကို ဟင်းချိုချက်သောက်၍ လည်ကောင်း ၊ ကြော်ချက်ပြုလုပ်၍ လည်ကောင်း ၊စားသုံးနိုင်သည်….။ အပူငြိမ်းစေခြင်း အိပ်ပျော်စေခြင်း နှလုံးကို အားရှိစေခြင်း ၊ အကျိုးများ ရရှိစေပါသည်….။ စွယ်တော်နီသည် အေးဖန်၍ ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်…။ ဝမ်းကို ချုပ်စေတက်သည်…။ သလိပ်နာ ၊ လေနာကို နိုင်၏…။ အဝါပွင့်သည် ဖန်၏…။ … Read more
ကျီးကန်းတွေ ညဖက်ကြီး အစာရှာနေတယ်၊
ကျီးကန်းတွေ ညဖက်ကြီး အစာရှာနေတယ်၊ မူမမှန်တဲ့ အကျင့်ပဲ၊ နီးစပ်ရာ လူကြီးသူမတွေ မေးကြည့်တော့။ အစာရေစာရှားပါးတော့မဲ့နမိတ်လို့ကြားဖူးတယ်… ကပ်ကြီးသုံးပါးမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ (၁)ရောဂါဘယကပ်ဆိုး… (၂)စစ်ဘေးကပ်ဆိုးပီးတော့ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ (၃)‌ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းကပ်ဆိုး လည်းဒီတိုင်းသာဆိုမကြာခင်ကြုံတွေ့ရမယ်ထင်တယ်(တချို့တွေကြုံတွေ့နေရပီ) အားလုံး တူတူဝေမျှ‌ပေးကမ်းရင်းကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ Credit လဲ့လဲ့ထွန်း က်ီးကန္းေတြ ညဖက္ႀကီး အစာရွာေနတယ္၊ မူမမွန္တဲ့ အက်င့္ပဲ၊ နီးစပ္ရာ လူႀကီးသူမေတြ ေမးၾကည့္ေတာ့။ အစာေရစာရွားပါးေတာ့မဲ့နမိတ္လို႔ၾကားဖူးတယ္… ကပ္ႀကီးသုံးပါးမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ (၁)ေရာဂါဘယကပ္ဆိုး… (၂)စစ္ေဘးကပ္ဆိုးပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးက်န္တဲ့ (၃)‌ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းကပ္ဆိုး လည္းဒီတိုင္းသာဆိုမၾကာခင္ၾကဳံေတြ႕ရမယ္ထင္တယ္(တခ်ိဳ႕ေတြၾကဳံေတြ႕ေနရပီ) အားလုံး တူတူေဝမၽွ‌ေပးကမ္းရင္းေက်ာ္လႊားနိုင္ၾကပါေစ Credit လဲ့လဲ့ထြန္း
ဆီးကျောက်တည်ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာများ ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်နေသည်ကို စနစ်တကျ မကုသဘဲထားခဲ့လျှင်ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးများ မကြာခဏဝင်ပြီး ဖျားနာတတ်ပါသည်။ ပိုဆိုးလျှင် အဆိုပါရောဂါပိုးများ သွေးထဲသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျောက်မှာ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီး ကျောက်ကပ်တစ်သျှူးများကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သောကြောင့် ကြာလျှင် ကျောက်ကပ်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။ဆီးလမ်းကြောင်းမှ မကြာခဏဆိုသလို သွေးနည်းနည်းချင်းထွက်ပြီး ဆီးနှင့်အတူ ဆုံးရှုံးလေ့ရှိသည့်အတွက်နာတာရှည်သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် သွေးနီဥများထွက်စေရန် လှုံ့ဆော်ပေးသော အီရက်သရိုပွိုင်တင် ဟိုမုန်းဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပါ ကျဆင်းစေပြီး သွေးအားနည်းရောဂါကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါသည်။ ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိခိုက်လာခဲ့လျှင် သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်နှစ်ခုစလုံး၌ ကျောက်တည်ပါက ကြာလျှင်နာတာရှည် ကျောက်ကပ်အားနည်းရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ Renalstone Health// ဆီးေက်ာက္တည္ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲလကၡဏာမ်ား ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္တည္ေနသည္ကို စနစ္တက် … Read more
ပိတောက်ပန်းတွေ ပွင့်နေတာ ရိုက်မလို့ ရှိသေး
ပိတောက်ပန်းတွေ ပွင့်နေတာ ရိုက်မလို့ ရှိသေး 😪💔 ဒီနေ့တော့ ပိတောက်ပန်းတွေ ပွင့်လို့ လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝါဝင်းနေတာပဲ. . . စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ ပိတောက်ပန်းတက်ခူးရင်း ဓာတ်လိုက်တယ်ထင်တာပဲ ပုံတွေတက်လာတာမြင်ရလို့ တခြားသူတွေလည်း သတိထားလို့ရအောင် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပိတောက်ပန်းခူးမည့်သူများ အပင်က မီးကြိုးနဲ့လွတ်မလွတ် သေချာကြည့်ပြီးမှ ခူးကြပါလို့ ဒီနေ့တော့ ပိတောက်ပန်းတွေ ပွင့်လို့ လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝါဝင်းနေတာပဲ. . . စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ ပိတောက်ပန်းတက်ခူးရင်း ဓာတ်လိုက်တယ်ထင်တာပဲ ပုံတွေတက်လာတာမြင်ရလို့ တခြားသူတွေလည်း သတိထားလို့ရအောင် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပိတောက်ပန်းခူးမည့်သူများ အပင်က မီးကြိုးနဲ့လွတ်မလွတ် သေချာကြည့်ပြီးမှ ခူးကြပါလို့ ပိေတာက္ပန္းေတြ ပြင့္ေနတာ ရိုက္မလို႔ ရွိေသး 😪💔 ဒီေန႔ေတာ့ ပိေတာက္ပန္းေတြ ပြင့္လို႔ လိုင္းေပၚမွာလည္း ဝါဝင္းေနတာပဲ. . . … Read more
နှာဆေးခြင်း နှာရည်ယိုခြင်းများအတွက်သဘာဝဆေးနည်း နှာရည်ယို နှာစေးနှာခေါင်းပိတ် ပျောက်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်း… ဆေးနည်း ၁။ ကင်​ပွန်​းသီး​ခြောက်​ကို ပြစ်​ပြစ်​​လေး​သွေးပြီး နှာ​ခေါင်​း​ပေါ်က်ို လူးပါ ၂။ နှာ​ခေါင်​းဝမှာ ပုံပါ ၃။ ၁ နာရီခွဲ​လောက်​ကြာတဲ့အခါမှာ လူးထားတာ​တွေ​ခြောက်​သွားမယ်​၊ ခွာလိုက်​ပါ (မှတ်ချက်၊ နှာဆက်​တိုက်​​ခြေပါလိမ်​့မယ်​ ပြီးရင်​နှာရည်​​တွေ​ပေါက်​​ပေါက်​ကျလာလိမ်​့မယ်​) ၄။ ၁ ရက်​ ၂ကြိမ်​လုပ်​ပါ၊ ၄ ရက်​လုပ်​ပြီးရင်​​ပေါ့သွားပါပြီ ​ပျောက်​သွားတဲ့ထိဆိုရင်​ ချိန်​ဆပြီး ဆက်​လုပ်​ပါ၊ ကိုယ်​​တွေ့ မှတ်တမ်းတခု ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ မြန်မာရိုးရာ သဘာဝ ဆေးနည်းများ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မပြောက်မပျက် တည်တန်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ရင်း ရှိသည့်အတိုင်း ရေးသားမှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် – နိုင်မြန်မာ (Australia) ႏွာေဆးျခင္း ႏွာရည္ယိုျခင္းမ်ားအတြက္သဘာဝေဆးနည္း ႏွာရည္ယို ႏွာေစးႏွာေခါင္းပိတ္ ေပ်ာက္တဲ့ သဘာဝေဆးနည္း… … Read more
ဖောရောင်တာအကုန်ပျောက်တဲ့ တောသပွတ်ခါးသီး အစွမ်းအံ့မခန်းပါပဲ အဖောရောဂါမှာ အသားအရေ ပွယောင်းယောင်းရှိပြီး ၊အရောင်မှာ အသားအရေ လိုသည်ထက် ပိုတင်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဖောတွင် အရက်ဖော၊ သွေးဖော၊ လေဖော စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိလေသည်။အရောင်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ရောင်ခြင်း၊ ဓာတ်ပျက်၍ ရေ ာင်ခြင်း၊ ဥတုအဟာရဓာတ်ကြောင့် ရောင်ခြင်းဟူ၍ အမျိုးမျိုး ရှိပြန်သည်။ တင်ပြလိုသည်မှာ အချို့အဖေါအရောင်သမားများသည်ရောဂါဖြစ်သည်ကိုသိလျှက် မိသားစုအ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ အမျိုးမရောဂါဖြစ်သည်ကိုသိလျှက် မိသားစုအခက်အခဲ၊ ငွေကြေအခက်အခဲ၊ ရောဂါဖြစ်သည်ကိုသိလျှက် မိသားစုအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ အမျိုးမျိုးသော အခက်အခဲအရ အိပ်ရာထက်ပက်လက်လဲရင်း သေဆုံးရခြင်းမျိုး မကြာခဏတွေ့ဖူးပါ၍ ငွေကြေ းလည်းမကုန် လမ်းဘေးခြံစည်းရိုးများပေါ်တွင် အလလမ်းဘေးခြံစည်းရိုးများပေါ်တွင် အလေ့ကျပေါက်နေတတ်သော တောသပွတ်ခါးသီးအား သတိရစေရန် ရည်ရွယ်ရေးသားပါသည်။သပွတ်ခါးသီးကို သုံးပိုင်း ပိုင်း၍ ရေဖြင့်(၃)ခွက်(၁) ခွက်တင် ကျိုပါ။ ၁ခွက်စာ တင်ကျန်ခဲ့သောသပွတ် ခါးသီးပြုတ်ရည်ကို (၁)ရက်ခန့်အအေးခံရပါမည်။ထိုအအေ … Read more
ကိုယ်တိုင် လုပ်စားလို့လည်းရ၊ တပိုင်တနိုင် စီးပွားဖြစ်လုပ်လို့လည်းရ၊ ဖရုံယိုပြုလုပ်နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ကိုယ်တိုင် လုပ်စားလို့လည်းရ၊ တပိုင်တနိုင် စီးပွားဖြစ်လုပ်လို့လည်းရ၊ ဖရုံယိုပြုလုပ်နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ကျောက်ဖရုံယို လုပ်နည်း ပါဝင်အစ္စည်းများ အတော်လေးရင့်သော ကျောက်ဖရုံသီး – ကီလိုဝက် (၃၂ ကျပ်သားခွဲခန့်) ထုချေထားသော ကျောက်ချဉ် (alum) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခန် ကွမ်းစားထုံး (lime stone or Chuna or Choona) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခန် ရေ – 10 cups (2500 ml ) သကြား –2cups (500 ml) သံပုရာရည် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ ပြင်ဆင် ပြုလုပ်နည်း ရေ – … Read more
အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကအုပ်စုပွဲစဉ်(၂)ပွဲဆက် ရှုံးခဲ့တာကြောင့် နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပြီး အိမ်ပြန်ရတော့မယ့် သက်ထားသူဇာ
အောက်စီဂျင်ထိုးကျလာတဲ့‌ အောင်လအတွက် အောက်စီဂျင်အိုးအကူညီတောင်းလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
လူတိုင်း ခက်ခဲ ကြပ်တည်းနေတဲ့ကာလမျိုးမှာတောင် ကားပေါ်မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သိန်းတစ်ရာကို ရိုးရိုးသားသားပိုင်ရှင်လက် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သူ